mutsauko pakati peiyo modhi neGPS uye iyo modhi ine GPS + Cellular | IPhone nhau
Uyu unogona kunge uri mumwe wemibvunzo iyo vazhinji vevashandisi vasina ruzivo munyika yehunyanzvi uye kunyanya Apple inogona kubvunza, ndosaka tichizopindura zvakajeka sezvinobvira nezve Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo modhi neGPS uye iyo modhi ine GPS + Cellular?
Tinogona kutaura ipapo kuti zvachose ese mamodheru ayo Apple ari kushambadzira nhasi kusvika paApple Watch, ane GPS. Izvo zvakanaka sezvo tichigona kuva anonakidza mabasa nekuda kweiyi tekinoroji uye yedu yakabatana iPhone.
1 Chii chaizvo chinoreva GPS paApple Watch?
2 Zvinorevei chaizvo kuva neGPS + Cellular?
Chii chaizvo chinoreva GPS paApple Watch?
Iyi tekinoroji inowedzerwa kubva kuApple Watch inotibvumidza kuita zviito sekutumira nekutambira mameseji, kupindura mafoni nekugamuchira zviziviso patinenge tiine iPhone yedu yakabatana newachi kuburikidza neBluetooth neWi-Fi. Uye pamusoro peizvi, iyo GPS yakabatanidzwa yatinayo muApple Watch inoshanda pasina kukosha kweiyo iPhone yakabatana kunyora nezviitiko zvekushandisa kure, nhanho uye nzira yatinoita patinorovedza muviri.
Zvinorevei chaizvo kuva neGPS + Cellular?
Chinhu chakanaka pamusoro peiyi tekinoroji ndechekuti mukuwedzera pakunyora zviitiko zvemuviri sezvatinoita nemamwe ese emhando yeCompertino firm, Apple Watch ine GPS + Cellular inotibvumidza kutumira uye kugamuchira mameseji, ese marudzi ezvekupushira notices, kupindura kune zvinouya kufona, kugamuchira zviziviso, kuteerera Apple Music uye Apple Podcasts (zvinoenderana nenyika) hapana chikonzero chekutakura iyo iPhone newe.
Kubva pane zvatinogona kutaura kuti zvinopa rusununguko rwakakodzera kune wachi ine nhamba yedu yefoni kuti tikwanise kusiya iPhone kumba. Mushure megore rimwe sarudzo iyi inowanikwa munyika medu nekuda kwekutaurirana pakati peApple nevashandisi Orange uye Vodafone. Parizvino ivo ndivo chete vashandisi vanozopa sevhisi kune vashandisi veApple Watch GPS + Cellular, mune imwe nguva zvingangove nechokwadi chekuti vamwe vachabatana.
Apple Yekuteedzana 7 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo modhi neGPS uye iyo modhi ine GPS + Cellular?
JAVIER HERNANDEZ GUZMAN akadaro
Ini ndinoshanda panze uye handidi kubhadharisa yangu iPhone, wachi yeapuro inogona kubatsira zvikuru
Pindura kuna JAVIER HERNANDEZ GUZMAN
Ndeapi marefu ekureba iyo iyo wactch foni inofanirwa kunge isina Wi-Fi network, nekuda kwekubatana kweBluetooth?
Ini ndinonyatsoda iyo apple brand, kana iwe uchida imwe, ini ndichairova iyo pane yangu instagram account, kana iwe uchida kunditevera uye unditumire ini yakananga, ini ndichakupindura iwe @ yt.marat292
Ruzivo runobatsira. Thankssss
Ini ndichangotenga wachi yeapuro kuburikidza neamazon, kunyanya nhevedzano yechina nhare mbozha, asi foni yandinayo ndeye huawei 4 pro. Wachi yangu ichashanda nefoni iyoyo.Ndiri munhu ane makore makumi manomwe nemaviri uye kunyangwe ndichiedza kuramba ndichifambirana, chokwadi ndechekuti handinzwisise zvakawanda.
Kana mumwe munhu achigona kundibatsira ndinozvikoshesa.
wachi ichauya nemusi weSvondo 18
Mhoro Agustin. Parizvino mawatch eApple haapindirane nemaitiro anoshanda eApple.
Iyo NFC yeiyo iPhone XS, XS Max uye XR yakavhurika zvishoma
Iyo eSIM inouya kune nyowani iPhone XS, iPhone XS Max uye iPhone XR yemunhu wese